Dhallinyaro badan oo kasoo goostay al-Shabaab
Dhallinyaro tiradooda badan tahay kuwaasoo la maskax beddelay lana khiyaanay inay ku biiraan ururka argaggixisada ah ee al-Shabaab ayaa kasoo goosanaya ururkaas si ay dib ugu laabtaan ehelladooda.
Xaaladaha nolosha ee ururka oo aad u adkaadeen, niyad-jab ka dhex jiro ururka iyo duqeymada joogtada ah ee ay ururka ku wadaan ciidammada xoogga dalka iyo taageerayashooda caalamiga ayaa loo aaneynayaa inay sababayaan ka soo goosashada dhallinyarada ee ururka.
Inta badan dhallinyarada ku biiraan ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab waxaa lagu khiyaanaa inay heli doonaan nolol wanaagsan iyo in jaceyl ka dhex jiro xubnaha ururka, waxayse la kulmaan nolol aad u adag wax walbana wuxuu ku saleysan yahay eex iyo qabyaalad. Dhallinyarada dhammaantood waxay kasoo goostaan ururka iyagoon laheyn wax hanti ah oo ay ka heleen ururka iyadoo inta aysan weli ku biirin loo sheego inay hanti ka heli doonaan ururka.
Ururka dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab wuxuu taageeraa tuugonimo iyo bililiqeysiga hantida dadweynaha Soomaaliyeed. Wixii laga helo bililiqeysiga waxaa inta badan qaataan hoggaamiyeyaasha saree e ururka wixii kasoo harana waxaa mushahar ahaan loo siiyaa dagaal-yahannada.Dhallinyarada kasoo goostay ururka waxay haatan ku gudo jiraan dhaqan-celis, waxaana dib dambe loogu celini doonaa bulshada. In badan oo ka tirsanaa ururka al-Shabaab waxay ururka uga soo goosteen maaddaama dowladda Soomaaliya ay u fidisay cafis guud si ay si dib ugu soo laabtaan bulshooyinkooda.